TMMOB Kanal Istanbul ပရောဂျက်သည်လူပြင်ဆင်သောဘေးအန္တရာယ် | RayHaber
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်TMMOB Kanal Istanbul ပရောဂျက်သည်လူတို့ပြင်ဆင်သောဘေးအန္တရာယ်
TMMOB Kanal Istanbul ပရောဂျက်သည်လူတို့ပြင်ဆင်သောဘေးအန္တရာယ်
tmmob channel လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဘေးအန္တရာယ်ကနေပြင်ဆင်တဲ့ Istanbul စီမံကိန်း
TMMOB Istanbul ပြည်နယ်ညှိနှိုင်းရေးဘုတ်အဖွဲ့သည် Canal Istanbul ရေလမ်းကြောင်းစီမံကိန်း၏ EIA အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်သက်၍ ဗိသုကာကုန်သည်များအသင်း Istanbul Metropolitan ဌာနခွဲတွင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။
TMMOB Istanbul ပြည်နယ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူး Cevahir Efe Akçelikကရှင်းလင်းချက်ကိုဖတ်ရှုသည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ဗိသုကာကုန်သည်ကြီးများအသင်း EIA အကြံပေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူးMücellaYapıcıနှင့် Prof.Dr. ဒေါက်တာ Haluk Eyidoğanသည်စီမံကိန်းနှင့်၎င်း၏သက်ရောက်မှုများကိုသဘောပေါက်ခဲ့သည်။
သတိပေး! CHANNEL ISTANBUL စီမံကိန်းသည်နောက်ကျမည့်အချိန်မတိုင်မီဖြတ်သန်းရမည်။
မကြာသေးမီကပထ ၀ ီ၊ ဂေဟဗေဒ၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုစီးပွားရေး၊ မြို့ပြ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအရေးကြီးသောဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာသဘာဝစီမံကိန်းဖြစ်သော Kanal Istanbul အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်များသည် Istanbul, Thrace, Marmara နှင့် Black Sea တို့အတွက်အရှိန်မြှင့်ထားသည်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပထမအကြိမ်ပတ် ၀ န်းကျင်သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ခြင်းအကြိုလျှောက်လွှာအစီရင်ခံစာကိုပြင်ဆင်ပြီး 2018 တွင်တင်ပြခဲ့သည်။ ပြည့်စုံသောပတ် ၀ န်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာကိုပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာကော်မရှင်သို့ 28.11.2019 သို့ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ယခုလေ့လာသိရှိရသည်။ ဤအစည်းအဝေးကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များနှင့် TMMOB မပါဝင်ဘဲပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အခန်းများကိုလျစ်လျူရှုသောစီမံကိန်းမန်နေဂျာများ၏သဘောထားကိုဤတန်ဖိုးထားလေးမြတ်မှုကိုတိုးချဲ့ချင်ပါသည်။
မကြာသေးမီက 1600 စာမျက်နှာ EIA ဖိုင်နှင့်၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲများကိုကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။ EAC အစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ယနေ့ IAC တွင်ဆွေးနွေးနေသောအကြောင်းအရာများ၊
•ယနေ့တွင် Istanbul သည်အခြားမြို့များမှသောက်သုံးရေ 70 နှင့်တွေ့ဆုံရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသည့်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး၊ သမ္မတအာဒိုဂန်က“ Istanbul သည်ရေငတ်ရန်လမ်းလျှောက်နေသည်” ဟုပြောကြားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ရေအရင်းအမြစ်များကိုမဖျက်ဆီးနိုင်ပါ။
•မြောက်ပိုင်းသစ်တောများ၊ ကုန်းမြေများ၊ စိုက်ပျိုးရေးandရိယာများနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောဂေဟစနစ်များအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်မည့်ဤစီမံကိန်းကိုကာကွယ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
•တက်ကြွသောပြတ်ရွေ့လိုင်းသုံးခုဖြတ်သန်းသွားသောဒေသကိုလူ ဦး ရေနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဖိအားပေးခြင်းဖြင့်ဘေးအန္တရာယ်ကိုတိုးစေနိုင်သောဤစီမံကိန်းကိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။
•ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစီမံကိန်းအားမြို့တော်မြောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးနှင့်၎င်း၏ထိခိုက်လွယ်သောဂေဟစနစ်၊ မြို့ပြ၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့်သဘာဝနေရာများကိုဖိအားပေးမည့်ဤစီမံကိန်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ငြင်းပယ်သည်။
•လူမှုဗေဒဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများသည်အလွန်အားကောင်းလိမ့်မည်၊ ဒေသတွင်းနေရာရွှေ့ပြောင်းခံရခြင်း၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းနှင့်စီးပွားရေးအခြေအနေအလွန်အမင်းတုန်လှုပ်ချောက်ချားခြင်း၊ စီမံကိန်း၏လက်မှအသက်နှင့်ရေရရှိပိုင်ခွင့်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ 56 သို့ ဦး တည်သွားလိမ့်မည်။ နောက်တစ်ကြိမ်
•ကျွန်ုပ်တို့သည်ငြင်းခုံမှုများသည် Kanal Istanbul ရှိ Bosphorus တွင်မရရှိနိုင်သည့်လမ်းကြောင်း၏လုံခြုံရေးကိုမထောက်ပံ့နိုင်ပါ။
• Channel Istanbul စီမံကိန်းသည် 2009 / 1 100 000 Istanbul ပတ် ၀ န်းကျင်စီမံကိန်း၏အထွေထွေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအခြေခံမူများနှင့်မူများကိုဆန့်ကျင်သော၊ Istanbul ၏မြို့တော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်သော XNUMX အပေါ်အတည်ပြုပြီးသောအရာသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးစီမံကိန်း၏အဓိကဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့က၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်သည့်စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဤအင်္ဂါရပ်နှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်းပြောပါသည်။
1600 စာမျက်နှာ EIA အစီရင်ခံစာကိုဖတ်ပြီးဆန်းစစ်သောအခါ၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်သက်ရောက်မှုများကိုအကဲဖြတ်သည့်အစီရင်ခံစာမဟုတ်ဘဲစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစီရင်ခံစာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာတွေ့ရသည်။
TMMOB Istanbul ပြည်နယ်ညှိနှိုင်းရေးဘုတ်အဖွဲ့အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းများအားကျွန်ုပ်တို့၏ပင်လယ်များ၊ ရေကန်များ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ စားကျက်များ၊ သစ်တောareasရိယာများ၊ ထိခိုက်လွယ်သောထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး,ရိယာများ၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာများ၊ သဘာဝနှင့်မြို့ပြအကာအကွယ်ပေးထားသောlifeရိယာများ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုတာဝန်ယူမှုရှိရှိလုပ်ဆောင်ရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။
TMMOB ပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှ Istanbul Channel
Wagon Malatya အတွက်စက်ရုံသဘာဝဘေးအန္တရာယ်အိမ်တော်ကိုပြုပြင်ခြင်းထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မည်
ထပ်36,5 သန်းပြည်သူ့ သာ. ကွီးမွတျအစ္စတန်ဘူလ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုအသုံးပြုနည်း
တစ်ဦးက New Vision ၏မိတ်ဆက်ဖို့တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်း
အမှား MI က Grand တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်, Min ဒါမှမဟုတ်ရာစုစီမံကိန်း?
TMMOB, ငွေ Plus အားလျှောက်လွှာမှ izban တုံ့ပြန်မှုအနေဖြင့်
BTS နှင့် TMMOB Ankara ရထားသဘာဝဘေးအန္တရာယ် Ortak ၏မိတ်ဖက်
TMMOB, Istanbul Metro တွင်ငလျင်လှုပ်ခြင်း…
TMMOB: 'luorlu ရုတ်တရက်သတ်ဖြတ်မှုမိသားစုများ၏တရားမျှတမှု'
ယနေ့သမိုင်းတွင် -2ဒီဇင်ဘာ 1861 Rumeli မီးရထား